Latest – Friday Times Journal
Online Shop များမှ ဈေးဝယ်ရာတွင် ဂရုစိုက်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်း စားသုံးသူအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ ကြေညာ
ပညာရေးတစ်ခုတည်းကိုသာအဓိကထားသင်ကြားရုံသာမက ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် အနာဂတ်ကိုပါ အလေးထားသင်ကြားပေးတဲ့ AEP(ဘော်ဒါနှင့် နေ့အထူး )
ကမ္ဘာက မြန်မာကို သွေဖည်လာချိန် တရုတ်ဘက်သို့ နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံမှုတွေ တိုးလာ
Friday Times Journal
Latest ပြည်တွင်း သတင်း
December 12, 2017 Editor0Comments online shopping, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး စားသုံးသူအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း ကော်မတီ, ဈေးဝယ်
မန္တလေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ မြေးချစ်ညို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေကြသည့် Online Shop များမှ ပစ္စည်းများဝယ်ယူသည့် အခါ ဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ ရှိနေသောကြောင့် မိမိ ဝယ်ယူအသုံးပြုမည့် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်
Latest သတင်း ဆောင်းပါး
December 9, 2017 Editor0Comments
ညိမ်းမျိုးဆက် ရေးသားသည်။ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော ခေတ်နှင့်အညီ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည်မှာ ပညာရေးပင်ဖြစ်သည်။ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များအတွက် ပြည်ပသို့သွားရောက်ပြီး ပညာ သင်ကြားသူများရှိသလို ပြည်တွင်းတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် နိုင်ငံတကာကျောင်းများ၊ အဆင့်မြင့်ကိုယ်ပိုင် အထက်
ကျော်နေမင်း (မြို့ပြ)ရေးသားသည်။ တစ်ချိန်တုန်းကဗမာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီစစ်အစိုးရလို့ ပြောကြတဲ့ဦးနုအစိုးရ လက်ထက်မှာနိုင်ငံသားအစ္စလာမ်တွေထဲက ဝန်ကြီးနှစ်ပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးရာရှစ် ခေါ် MA ရာရှစ် (ကိုအောင်ဆန်းကြိုက်တဲ့အမည်) နဲ့ တရားရေးဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်လတ်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်အစိုးရလို့
နေဇော်(RJN) ရေးသားသည်။ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ ဘာသာမတူ၊ စကားပြောဆိုပုံ မတူ၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံမတူတဲ့ လူမျိုးစုနှစ်စုကြားမှာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်လို့မဖြစ်၊ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ မဖြစ် နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့သံသယဟာ ရိုးသားတဲ့ပြည်သူ အကြားမှာ ၁၉၈၈နောက်ပိုင်းကာလကစလို့ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ကြီး
မင်းစိုး (စက်မှုတက္ကသိုလ်) ရေးသားသည်။ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များအပေါ် ရက်စက်သော သုတ်သင်ရှင်းလင်းမှုများအား နိုင်ငံတကာ၏ ဝေဖန်ပြစ်တင် မှုများကြောင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက် နေစဉ် မြန်မာ့ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်များ တစ်ပတ်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ်အလည်အပတ်ခရီးစဉ်အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့တော်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏
ကိုတင့် (မြန်မာစာ) ရေးသားသည်။ ဒီခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းတွေ စတင်ပေါ် ပေါက်လာပါတယ်၊ မေးခွန်းများကိုလည်း အတတ် နိုင်ဆုံး တော့ ဖြေကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းတွေကတော့ လူနည်းစုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း? လူနည်းစု၏အဓိပ္ပါယ် ကို ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုပါသလဲ ?
ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ရန် အနီရောင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပါဝင်သည့် R2P အကာအကွယ်ပေးရေးတာဝန်ယူမှု
နေသူရိန် ရေးသားသည်။ အကာအကွယ်ပေးရန် အခွင့်အာဏာR2P အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစင်တာအား လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုများ၊ လူမျိုးစုရှင်းလင်းခြင်းနှင့် လူသား မျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သော ရာဇဝတ်မှုများအတွက် R2P စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်ခံ မှုနှင့်
Latest ပြည်တွင်း ဆောင်းပါး
နိုင်ငံသားကတ်လျှောက်ထားရာတွင် တွေ့ကြုံနေရသောအခက်အခဲများကို ဥပဒေနှင့်အညီ အမှန်တကယ် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါ (၄)
ဦးအုန်းမောင် (ရန်ကင်း) တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ရေးသားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဓိကအခြေခံရမည့်မူမှာ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီးများ မျှော်မှန်းချမှတ်ခဲ့သည့် ၁၉၄၇-ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ-၂ ပါ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင် ပါဝင်ရမည့် ပိုင်နက်နယ်မြေအားလုံးအတွင်း ပုဒ်မ-၁၁(က) (ခ)
Latest ဆောင်းပါး ဝေဖန်ရေး ဆောင်းပါး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် သတင်းရယူခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထောက်အချို့၏အမြင်
ညိမ်းမျိုးဆက် စုစည်းတင်ပြသည်။ ၂ဝ၁ဝခုနှစ်မှ စတင်၍ ပြန်လည်ပြုလုပ်လာသည့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများတွင် အများပြည်သူများ သိရှိနိုင်ရန်အလို့ငှာအတွက် စာနယ်ဇင်းမီဒီယာအသီးသီးမှ သတင်းထောက်များက လွှတ်တော်သို့ သွား ရောက်၍ သတင်းများရယူခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့ သွားရောက် သတင်းရယူရာတွင်
လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးခယောင်းလမ်းပေါ်မှာ (၁၅)
စိုင်း (မန်း) ရေးသားသည်။ လူမှုရေးသမားဘဝမှ နိုင်ငံရေးခယောင်းလမ်းသို့ ခြေလှမ်းများ ကျွန်တော် တောကျောင်းဆရာဖြစ်စက မဆလ တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ် အခြေပျိုးစမို့ တောင်သူလယ် သမားတွေရဲ့ စားဝတ်နေမှုဘဝက အခြေအနေသိပ်မဆိုး သေးဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်လစ် အတုအယောင်
Copyright © 2017 Friday Times Journal. All rights reserved.